पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई अस्पताल भर्ना - समाचार - कान्तिपुर समाचार
नयाँदिल्ली — स्वास्थ्य उपचारका लागि नयाँदिल्ली आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना भएका छन् । भट्टराईलाई मंगलबार दिल्लीको वसन्तकुञ्जस्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थानमा भर्ना गरिएको छ ।
सोमबार अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. विक्रम भाटियाले भट्टराईको प्रारम्भिक परीक्षण गरेका थिए । भट्टराईले यसअघि ललितपुरको निदान अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका थिए । उपचारकै क्रममा भट्टराईलाई न्यूरो–इण्डोक्राइनमा ट्युमर पलाएको आशंका गरिएको छ ।
भट्टराईका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेका अनुसार नेपालमा त्यो ट्युमर घातक भएको वा नभएको नखुलेपछि निदानका चिकित्सक डा. निरज जोशीले नै भट्टराईलाई उपचारका लागि चाँडोभन्दा चाँडो दिल्ली जान सुझाएका हुन् । भट्टराईको मंगलबार दिनभरि नै स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ । त्यसपछि मात्र ट्युमर घातक भएको वा नभएको यकिन हुने भट्टराईले सोमबार साँझ कान्तिपुरसँगको भेटमा बताए ।
लामो समयदेखि पेटको समस्या पीडित भट्टराई थप उपचारका लागि आइतबार नयाँदिल्ली आएका हुन् । उनको साथमा श्रीमती हिसिला यमी र प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डे समेत छन् । उनीहरु सबै जना दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमै बसेका छन् ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ ११:४८
अस्ट्रेलियाले कानुन संशोधन गर्ने, फेसबुकले समाचार सामग्रीमाथिको रोक हटाउने
सिड्नी — सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले अस्ट्रेलियामा समाचार सामग्रीमाथि लगाएको रोक हटाउने भएको छ । अस्ट्रेलियाका ट्रेजरर जोस फ्राइडेनबर्गका अनुसार सरकारको प्रस्तावित कानुनमा केही संशोधन गर्ने भएपछि केही दिनमै प्रयोगकर्ताका लागि समाचार सामग्री दिन फेसबुक तयार भएको हो ।
अस्ट्रेलिया सरकारले फेसबुक र गुगलमा उपलब्ध हुने समाचारको पैसा तिर्नुपर्ने नियम लगाउने मिडिया कोड संसद्‌बाट पारित गर्ने बताइरहेको बेला फेसबुकले सबै प्लेटफर्मबाट समाचार सामग्री हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
फेसबुकको पछिल्लो कदमसँगै बिहीबारदेखि अस्ट्रेलियाका समाचार संस्थाको अपडेट फेसबुकमा उपलब्ध हुन छोडेको छ । अस्ट्रेलियाका फेसबुक प्रयोगकर्तामाझ अस्ट्रेलियाली समाचार संस्थाका समाचार मात्र नभएर बीबीसी, न्युयोर्क टाइम्सलगायत विश्वका अन्य प्रतिष्ठित समाचार संस्थाको समेत अपडेट बन्द गरिएको छ ।
बीबीसीका अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको मिडिया कोडअनुसार फेसबुक, गुगलले यहाँका पत्रकारले उत्पादन गरेको समाचार आफ्नो प्लेटफर्ममा सेयर भएबापत् निश्चित रकम तिर्नका लागि सम्बन्धित समाचार संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ । यदि सम्झौता सफल नभए र कानुन तोडेको पाइएमा १ करोड डलरसम्म जरिवाना हुने वा स्थानीय बजार रकमको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
अस्ट्रेलियाले केही समयअघिदेखि नै ‘न्युज मिडिया बार्गेनिङ कोड’ लाई कानुनी हैसियत दिइने बताउँदै आएको थियो । उक्त कोडमा स्थानीय समाचार संस्थाले प्रकाशन गरेको समाचारलाई फेसबुक, गुगलजस्ता डिजिटल मिडियामा प्रयोग भएबापत् सम्झौता गरेर निश्चित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त कानुन तल्लो सदनबाट पारितसमेत भइसकेको छ । यसअघि फेसबुकले अस्ट्रेलियाली समाचार संस्थासँग सम्झौता प्रयास गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । गुगलले भने केही ठूला समाचार संस्थासँग यसबारे सहमति गरिसकेको बताइएको छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७७ १०:४४
आइपुग्यो ३ लाख ४८ हजार डोज खोप